Nepali Rajneeti | एमसीसीले जोड्न सक्छ काँग्रेस-माओवादीलाई !
बैसाख १५, २०७८ बुधबार १८९ पटक हेरिएको
एमाले इतर दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न थालेको कति भयो ? सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे देखिनै उनीहरू ओलीको बहिर्गमन पर्खिरहेका छन् ।
माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनका लागि देउवाले माओवादीलाई एमसीसी पास गराउने सुनिश्चितता खोजेका छन् । माओवादी र काँग्रेस एमसीसीका पक्षमा आए ओली यसअघि नै एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
उनले सभामुखले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । एमसीसीकै कारण विपरीत वैचारिक धारका काँग्रेस र माओवादीबिच सत्ता गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ ।
जसरी पनि ओलीको बहिर्गमन खोजिरहेको माओवादी एमसीसीमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर भए पनि काँग्रेसलाई मनाउने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार गर्ने तयारी काँग्रेस माओवादीले गरेका छन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान स्पष्ट पारेर सहमति गर्न सकिने वचन माओवादीले दिएको छ ।
काँग्रेस माओवादी गठबन्धन सत्ता समीकरणका लागि मात्रै होइन आगामी चुनावसम्मै कायम रहेन माओवादी नेताहरू बताउँछन् । एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा काँग्रेस पहिलेदेखि नै भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पनि, नबने पनि त्यो विषय काँग्रेसको एजेन्डा बनिरहने काँग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । यता जसपा पनि सत्ता गठबन्धनका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने तयारीमा छ ।
एमसीसीका विषयमा जसपाका खासै विवाद छैन । तर, जसपाले काँग्रेस–माओवादीभन्दा ओलीलाई साथ दिने सम्भावना प्रबल छ । जसपाका संस्थापन महन्थ ठाकुर पक्ष निरन्तर ओलीलाई साथ दिन सकिने बताउँदै आएको छ । ठाकुरको जसपाका बहुमत रहेको पनि बताइन्छ ।
लामो समय सत्ता समीकरणका लागि कसरत गरेका काँग्रेस माओवादीलाई अन्ततः एमसीसीले जोड्ने देखिएको छ । यता ओली पनि एमसीसीलाई विषय बनाएर काँग्रेसको विश्वास जित्ने मनसायमा छन् ।
उनले केही दिनअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी संसद्मा छलफलको विषय बनाइनुपर्ने बताएका थिए । जसमा काँग्रेसले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।